Nri ndị na-eme ka ahụ gị na-adị mma: Mụta ihe ha bụ!
N’oge a na ọtụtụ nri ndị mepere emepe, ọtụtụ nri na-eri nri na ọsọ nke ndụ a na-adị kwa ụbọchị, ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ihe ngwa ngwa ma ọ bụ nke dị njikere iri ihe anaghị adị mma mgbe niile ma ọ bụ dị mma maka ahụ anyị.
Ọtụtụ ndị na-ele nri ndị dị mma anya ka ihe na-adịghị mma ma ọ bụ na-atọ ụtọ, n'ihi na n'ime ya bụ nnukwu ndudue, nri ọ bụla na nri ọ bụla nke ọma nwere ike ịdị ụtọ ma dịkwa ụtọ.
N’oge ugbu a, enwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ inụ nwere ezigbo ahụike na nri dị mkpa. Ọ bụrụ na ị bụghị nnukwu onye isi nri na-enweghị oge buru ibu iji sie nri, chọọ ụlọ nri n'obodo gị nke na-anaghị ada mbà na-eje ozi nri dị mma ma dị ụtọ.
Nri nke aghaghi itinye na nri
Ka anyị nwee ike ịgbanwe ụdị echiche anyị nwere banyere nri, anyị ga-ebu ụzọ ghọta isi nri niile, ya bụ, nri a na-eri kwa ụbọchị na-emeghị ka ha chee na ha bụ:
ọka na mgbọrọgwụ - Ndị a bụ nri nke, dịka ha bara ọgaranya na carbohydrates, na-enyekwu ume ka anyị wee na-eme ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị, mana maka ndị na-eme ahụ ahụ, ha ga-erichapụ ntakịrị ntakịrị karịa nkịtị.
Mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na akwụkwọ nri - dị mkpa iji dozie ahụike na arụmọrụ kwesịrị ekwesị nke ahụ, ebe ha bara ọgaranya na fiber, vitamin na mineral.
Agwa Lentil na agwa - Nri juputara na protein, inine, iron na faiba.
Anụ na nri anụmanụ - Ha bara ọgaranya na calcium na protein ndị na-ewusi ike, too ma ghọọ akpụkpọ, mbọ, ntutu, ezé na ọkpụkpụ.
Nri ndị a na-ahụta na-adịghị mma bụ ndị ọgaranya nwere shuga dị ka swets, candies, chọkọletị, ice cream, wdg. Ọzọkwa, nri eghere eghe na mmanụ nri, margarine ma ọ bụ bọta na nri nwere oke nnu, nke dị n'ọtụtụ nri, adịghị mma. nri.
Fọdụ ndụmọdụ gbasara nri dị mma yana ọrụ ya
Sweet poteto bara ọgaranya na ọla kọpa nke na-akpali collagen mmepụta nke na-enyere aka mee ka anụ ahụ sie ike ma gbochie wrinkles.
Mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie bara ọgaranya na antioxidants, nke na mgbakwunye na ịnọgide na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke ụbụrụ na obi, na-ahapụ akpụkpọ ahụ dị nro.
Mkpụrụ bara ụba na abụba ahụike, antioxidants, eriri, protein, vitamin na mineral ma bụrụ ezigbo ndị na-efu ọnwụ.
Na-echeta mgbe niile ịchọ ezigbo nri maka ndụ dị mma na ndụ toro ogologo. Mgbe ị na-azụ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ na-enye nri na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, na-ahọrọ ngwaahịa ndị sitere n'okike, dị ka nri dị na broshuọ a, ma ọ bụ na-ahọrọ ngwaahịa ngwaahịa.
Na otu ọla edo ọzọ
"Rinkụọ mmiri buru ibu?"
Ejikwa mmiri mee ahụ anyị, ihe okike a enweghị ike ịla n'iyi site na ndụmọdụ anyị, anyị ga-a atụ ma ọ dịkarịa ala lita mmiri abụọ kwa ụbọchị. Mmiri na-ewetara anyị ọtụtụ elele, na mgbakwunye hydration, ọ na-edozi ahụ ọkụ, na-edozi ahụ, na-amị ma na-ebubata nri na oxygen.
Ya mere, nwee obi ụtọ n'ọchịchọ gị maka nri bara ụba na protein na nri ndị dị mma maka ahụike gị!
Mmetụta ụra na ahụike
Cinnamon Tea: chọpụta ihe ọ na - eme ma ọ bụrụ na ọ dị mma maka ahụike gị